केपी–पीके लभ स्टोरी - परिहास - नेपाल
केपी–पीके लभ स्टोरी
- सूर्जे नेवा:
कमरेड केपी ओली र कमरेड पुष्पकमल (पीके) दाहाल जोडीको अहिले जताततै चर्चा–परिचर्चा छ । कहिले कहाँ सँगै पुगे रे ! कहिले दुवै जना कौसीमा घाम ताप्दै गफ गरे रे ! कहिले अबेर रात एकअर्काको घरमा सुटुक्क पसे रे ! यस्तै–यस्तै यी दुई जोडीको समाचार अहिले अखबार, टेलिभिजन, रेडियोदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म व्याप्त छ । कहिले कता त कहिले कता सँगसँगै नारिएर हिँड्ने यो जोडी अहिले हिट छ । लाग्छ, अब विश्वविख्यात जोडीहरु राम–सीता, मुना–मदन, लैला–मजनु, रोमियो–जुलियटजस्ताको नामभन्दा पनि माथि अब यो जोडीले नाम लेखाउनेछ । तर, हेर्न बाँकी छ, वाम एकता गरेर नेपाली कांग्रेसलाई भित्तामा पुर्‍याउन सफल जोडी केपी र पीकेको ‘डिप लभ’को कहिले ‘ब्रेकअप’ हुने हो ?
प्रकाशित: पुस १६, २०७४